Home Wararka Soomaali badan oo loo diiday sharciga Canada oo loo soo musaafuriyay Soomaaliya
Soomaali badan oo loo diiday sharciga Canada oo loo soo musaafuriyay Soomaaliya
Waxaa soo badanayaa tirada Soomalida dowladda Canada sheegtay inay dalkeeda ka masaafurinayso sababo la xiriira xagga sharciga. Qaar ka mid ah Somalidaas oo lagu eedeeyay inay qariyeen aqoonsiga Kenya oo ay haysteen waxaana hadda dowladdu sheegtay inay celinayso halka kuwa kale go,aan sugayaal yihiin.
Qaar kamid ah dadkii ay go’aamisay dowladda Canada in dalka dib looga celiyo ayaa haatan sugayaa go’aanka kama dambeysta ah, waxay dowladda tallabaadaas uga laabtay markii Soomaalida ay sameeyeen isu soo baxyo ay uga soo horjeedaan in dadkaas aan lagu celin Soomaaliya.
Laga bilaabo sanadkii 2015 waxaa soo badanayay tirada Soomaalida ah ee laga musaafurinayo Canada, tirada Soomaalida laga soo tarxiilayo Canada ayaa sanadkii 2020 gaartay 61, halka sanadkan ay gaari karto 77 qof.
Markii dalka Soomaliya uu burburay, waxaa qaxooti ku noqday dibadaha kumaanan kun Soomaali ah, dalalka Soomalida u frixatay waxaa ka mid ah, Canada, magaalooyin dhowr ah oo wadankaas ka mid ah ayey dageen, magaalada ugu badan oo soomalidu ka degan tahay Canada waxaa lagu sheegay in ay tahay Toronto, hase yeeshee waxey sidoo kale deggan yihiin Otawa iyo magaalooyinka kaleba.
Previous articleLafta Gareen oo la soo dardaarmay Xildhibaanada Koonfur Galbeed
Next articleMaxkamadda CXD ee Puntland oo saaka xukun dil toogasho ah ku fulisay nin loo haystay dil
Xafiiska RW Kheyre oo bilaabay in la handado xildhibaanada Galmudug